Tuesday July 09, 2019 - 17:49:15 in Wararka by Wariye Qoslaaye
Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS) mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) ayaa maanta guddoomiyay shir ay yeesheen guddi hoosaadka golaha wasiirrada ee tubta horumarinta dhaqaalaha.
Shirka oo ay ka qeyb galeen dhammaan wasaarahaha halbeegyada ku leh tubta horumarinta dhaqaalaha ayaa looga hadlay horumarinta dhaqaalaha dalka, waxaana warbixinno looga dhagaystay wasaaradaha maaliyadda iyo ganacsiga.
Wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa shirka kusoo bandhigtay heerka uu soo gaaray qorshaha daynta looga cafinayo dalka (SMP4).
Warbixin la xariirta iskaashiga ganacsi ee Shiinaha iyo Soomaaliya ayaa sidoo kale laga dhagaystay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya.
Intii uu shirku socday ayaa sidoo kale warbixin looga dhagaystay guddi loo xil saaray heshiiska cusub ee dowladdu la gashay shirkadda Al-bayrak ee maamusha dekadda magaalada Muqdisho, iyada oo ugu dambeyn lagu soo bandhigay warbixin guud oo looga hadlay tubta horumarinta dhaqaalaha iyo sida ay u socdaan halbeegyada guud ee sannadkaan qorshuhu ahaa in tubtu ay fuliso.
Turbta horumarinta dhaqaalaha ayaa qayb ka ah afarta tub qaran ee lagu saleeyay shaqooyinka qaranka si looga mira dhaliyo himilooyinka ummadda Soomaaliyeed.